Vanhu Vanopinda neChisimba muZimbabwe Embassy kuLondon
Nhengo dzesangano reRestoration of Human Rights dzichiratidzira. (File Photo)
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muLondon zvichinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu kumusha, kushaikwa kwezvimwe zvinhu muzvitoro, uye kunetsa kwemari.
Vanhu ava, avo vanga vachidarika makumi maviri, vapinda mukati memuzinda uyu umo vanonzi vadzikisa mufananidzo wemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, wanga wakaturikwa kumadziro.
Vashandi vepamuzinda vanonzi vazoguma vadaidza mapurisa ayo angokwanisa kuburitsa vanhu ava panze, asi pasina asungwa.
Imwe nhengo yeRestoration of Human Rights, ROHR, iro raronga nezvekuratidzira uku, VaPanyika Karimanzira, vanoti zvimwe zvaita kuti vatore danho iri kusungwa kwaMufundisi Evan Mawarire nemusi weSvondo muHarare.
"Tapinda mumuzinda kuti tizivise pasi rose nezvematambudziko akatarisana neZimbabwe uye kutsutsumwa kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti tinotarisirwa kutumira mari kumusha asi tisingabvumidzwi kuvhota tiri kwatiri," VaKarimanzira vanodaro.
Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvatotanga kutsvaga nzira dzekutumira nadzo zvekudya zvinonzi zvave kunetsa kuwana munyika nekuda kwekushaikwa kana kukwira kwemitengo.
Mutungamiri wesangano revanotengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association, VaDenis Juru, vanoti nhengo dzavo dzatotanga kuona huwandu hwevanhu vari kutumira kumusha zvekudya zvinonzi zvave kunetsa kuwana.
VaJuru vanoti vazhinji vevari kunze kwenyika vanotya kwazvo kuti zvakamboitika muna 2007/2008 zvekushaikwa kwezvinhu muzvitoro zvingangodzoka.
Zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, nemafuta edzimotokari zvatotanga kunetsa munyika, panguva imwe cheteyo mari iri kunetsawo.